BBC Somali - War - Aftida Sudan
9 Janaayo, 2011, 16:20 GMT 19:20 SGA
Sudan: Waddan kala qeybsan
Biyaha iyo Nadaafadda
Kala qeybsanaanta weyn ee Sudan waxaa laga arki karaa kor sida uu muujinayo sawirkan Nasa ee dayax gacmeedka. Gobolada waqooyi waa dhul saxara ah, oo uu dhexmaro webiga Niil. Koonfurta Sudan waxa qariyay cagaar, doog iyo dhul keymo ah.
Gobolada waqooyi ee Sudan ee qallalan waxa u badan oo deggan dadka ku hadla Carabiga ee Muslimka ah. Laakiin Sudan koonfureed ma jiro dhaqan u badan. Dinkas iyo Nuers ayaa ah qowmiyadaha ugu balaaran ee in ka badan 200 qowmiyadood, oo mid walba ay leedahay dhaqan ay aaminsan yihiin iyo luqad.
Sinnaansho la'aanta caafimaad waxaa lagu muujiyay heerka dhimashada dhalaanka yaryar. Koonfurta Sudan 10 kii dhalaan ah mid ka mid ah ayaa dhinta inta aanu sanad gaarin. Halka gobollada horumaray ee Waqooyiga, sida Gezira iyo White Nile, kala bar la fisho in dhalaanku ay bedbaadaan.
Is faham la'aanta dhinaca biyaha ee u dhexeysa Waqooyiga iyo Koonfurta ayaa ah mid adag. Khartoum, gobollada River Nile iyo Gezira waxa ay ay leeyihiin dhuumo biyaha la cabo. Koonfurta Godad iyo ceelal aan nadiif ahayn ayaa biyaha laga cabaa. In ka badan 80% dadka reer Koonfur maba lahan musqulo.
Sudan oo dhan in waxbarasho hoose la helo waxa ay si weyn ugu xiran tahay dakhliga soo gala qoyska. Qeybaha ugu saboolsan ee Koonfurta in ka yar 1% carruurta ayaa dhameysa dugsiga hoose, halka Waqooyiga qaniga ah ilaa 50% carruurtu ay dhameyso heerka waxbarashada hoose.
Khilaafka iyo saboolnimada ayaa ah sababaha ugu weyn ee keena cunno yarida Sudan. Dadka ku nool gobollada dagaalladu saameeyeen ee Darfur iyo Koonfurta Sudan waxa ay weli ku tiirsan yihin cuntada gargaarka ah. In ka badan gobollada waqooyi, oo iyagu qani ah, ka magaaleysan, oo aanan kuna tiirsaneyn beeraha.
Sudan waxa ay dhoofisaa saliid ku kacaysa balaayiin dollar sanadkii. Gobollada koonfureed waxa ay soo saaraan 80% oo ka mid ah saliiddaasi, laakiin waxay heshaa oo keliya 50% dakhliga, taasi oo sii kicineysaa xiisadda ka dhaxeysa Waqooyiga. Gobolka saliidda qaniga ku ah ee Abyei waxa uu qabanayaa afti uu ku go'aansanayo inay ku biiraan waqooyiga ama koonfurta.
Maalintii labaad codbixinta aayaha Koonfurta Sudan
10 Janaayo 2011